Guangdong Qianjin Warshadaha waxay maalgashanayaan dhismaha 200,000-tan / sanad balaaran oo soosaarid qabow oo lagu dego Shizong, Yunnan - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Guangdong Qianjin Warshadaha waxay maalgashanayaan dhismaha 200,000-tan / sanad balaaran oo waxsoosaar rooga qabow oo la dejiyay Shizong, Yunnan
Sanadihii la soo dhaafay, Degmada Shizong waxay raacday fikradda ah "buuxinta silsiladda, fidinta silsiladda, iyo xoojinta silsiladda", iyadoo lagu tiirsan yahay 1.575 milyan oo tan oo ah waxsoosaarka awoodda wax soo saarka birta ceyriin ee birta ah, si firfircoon u kobcinaya una ballaadhinayo birta silsiladda warshadaha birta ah, kuna dadaal inaad sameysid koox warshad bir ah oo birta ah, kuna dadaal inaad sameyso Shizong County Stainless Steel Industrial Park waxaa lagu dhisay Yunnan oo ah magaalada keliya ee birta birta ah ee heerka koowaad ka sameysan.
Sida qorshuhu yahay, Shizong County Stainless Steel Industrial Park waxay leedahay dhul ballaadhan oo baaxaddiisu dhan tahay 279.76 hektar iyo maalgashi guud oo lagu qiyaasay 7.81 bilyan yuan. Waxaa lagu qiyaasayaa in sanadka 2025, ay gaari doonto dakhliga iibka oo gaaraya 62.8 bilyan yuan, wadar faa iido dhan 1.81 bilyan yuan, iyo wadarta canshuurta 1.26 bilyan yuan. Waxaa la qorsheeyay in la qaato 3 ilaa 5 sano si loo dhiso Shizong County Stainless Steel Industrial Park iyadoo loo marayo nooc casriyeysan oo ka kooban silsiladaha warshadaha oo dhan oo isugu jira alaabta ceeriin, dhalaal, rogrog kulul, qaboojinta qoto dheer oo qabow, iyo badeecooyin kala duwan oo bir ah si loo dhiso koox cufan warshad bir ah oo aan xamuul lahayn.
Warshadaha birta biraha ah ee gobolka ayaa ka bilaabmay Yunnan Tiangao Nickel Industry Co., Ltd., oo soo jiidatay maalgashi sanadkii 2009. Khadkii wax soo saarka dhalaalka ee ahama ayaa la dhamaystiray lana bilaabay hawlgalkii bishii Ogos 2012. Waqti ka dib, hal warshad iyo silsilad warshadeed oo aan dhammaystirnayn ayaa xaddiday horumarka iyo koritaanka warshadaha birta ahama ee Shizong.
Si loo siiyo ciyaar buuxda faa'iidooyinka gaarka ah ee asalka ah 1.575 milyan tan oo ah waxsoosaarka birta ceyriinka ee ahama, Degmada Shizong waxay soo bandhigtay Qujing Dachang Trading Co., Ltd., Chongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co., Ltd. iyo Shizong County Fangwei Investment iyo Horumarinta Co., Ltd. iyada oo loo marayo dhiirrigelinta maalgashiga. Shizong County Wolaidi Metal Materials Co., Ltd., oo wadarta maalgashi dhan 870 milyan yuan, waxay dhisi doontaa 1.4 milyan tan oo ah 1780mm khadka wax soo saarka duudduuban oo kulul iyo 300,000 tan oo ah 1450mm kuleylka kuleylka iyo khadka wax soo saarka. Mashruucu wuxuu bilaabmay dhismaha May 29, 2018 wuxuuna dhamaan doonaa 2019. Mashruuca waa la dhammeeyay waxaana la soo saaray wax soo saar Oktoobar 18, 2010. Dhameystirka mashruuca wuxuu buuxiyey farqiga u dhexeeya wax soo saarka birta balaaran ee Yunnan. Waxaa lagu soo warramay in khadka wax soo saarka ee Volody uu yahay kii ugu horreeyay ee dhammaystiran ee si madaxbanaan loo soo saaro khadka wax soo saarka mashiinka cusub ee Shiinaha. Waxay qaadataa tikniyoolajiyad casri ah sida gaarsiinta kulul iyo kuleylka kulul ee looxyada, dhumucda Haydarooliga, xakamaynta balaaran ee otomaatiga ah iyo tikniyoolajiyadda kale ee horumarsan ee soosaarida saxanka ee gudaha iyo dibaddaba. Duubista alaabada birta ah ee birta aan caadiga ahayn.
Gudaha Shizong County ahama Steel Park Park, Shizong County Wo Laidi Birta Waxyaabaha Co., Ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha badan ee ku yaal baarkinka birta ah ee birta ah ee gobolka, waana kaliya hal xiriiriye silsiladda warshadaha birta ah ee birta ah.
Sanadka 2020, Shizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd. waxay soo saari doontaa 680,000 tan oo ah bir bir ah oo kala duwan, qiimaha wax soo saarkiisuna yahay 5 bilyan yuan iyo macaash dhan 170 milyan yuan. Isla mar ahaantaana, waxay si guul leh u soo bandhigtay Yunnan Jingzhong New Materials Co., Ltd. oo leh wax soo saar sanadle ah oo ah 200,000 tan oo rogid qabow oo baaxad leh iyo Guangdong Qianjin Industrial si ay u maal gashato dhismaha 200,000 tan oo wax soo saar ballaadhan oo qabow-rogid ah. mashaariicda, iyo sidoo kale taageeridda dhismaha xiirashada birta aan xarka lahayn, koronto siinta iyo khadadka kale ee wax soo saarka. Shirkadaha biraha ka sameysan ee biraha ka hooseeya waxay u baahan yihiin inay bixiyaan noocyo kala duwan oo taarikada birta ah, tuubooyin, iwm, kuwaas oo dhameystiraya silsiladda oo dhan ee horumarinta warshadaha birta ahama waxayna furaysaa "maylkii ugu dambeeyay" ee xaddidaya horumarka gobolka warshadaha birta.
Iyada oo la hagaajinayo silsiladda warshadaha birta ah ee birta ah, Sichuan Guojinrong Birta Waxyaabaha Co., Ltd., Sichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co., Ltd., iyo Chengming New Materials Co., Ltd. ayaa bilaabay dhismaha saxanka iyo mashaariicda wax soo saarka tuubooyinka. Waqtigan xaadirka ah, dhismaha aqoon isweydaarsiyo mideysan ayaa gabagabo ku dhow. Waxaa la filayaa in la dhammaystiro lana soo saaro wax-soo-saarka bisha Juun 2021.
Waqtiga boostada: Apr-10-2021